लजमा ‘सेक्स’ र प्रहरीकोे ‘बहादुरी’ – Kalika News
लजमा ‘सेक्स’ र प्रहरीकोे ‘बहादुरी’
३१ असार २०७६, मंगलवार २२:३२ , मा प्रकाशीत
मुकुन्द भुसाल, असार ३१ ।
बलात्कार र सहमतिको शारिरिक सम्बन्धबिच के भिन्नता छ ? बलात्कारी वा सहमतीमै शारिरिक सम्बन्ध राखेकाहरु मध्ये कसलाई कारबाही गर्नु बढी वाञ्छनिय होला ? हिजोदेखि मेरो मनमा यस्तै यस्तै बिचारहरुको उर्लापात चलिरहेको छ ।
म समाचार कक्षमा आफ्नै दैनिकीमा ब्यस्त थिएँ । कुन्नी कताबाट प्राप्त एउटा समाचारको अघिल्तिर मेरा आँखा तेर्सिए । त्यसको सिरानमै लेखिएको थियो …..“यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न ९७ जना चितवन प्रहरीको नियन्त्रणमा ।” सोचेँ पुलिसहरुले फेरी बहादुरी देखाएछन् । हो, त्यही बेलादेखि हो मेरो मनमा सोँचाईका ज्वारभाटाहरु चल्न थालेको ।
म मान्दछु कि, प्रहरी प्रशासनको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो अनि अन्यायमा परेकाहरुलाई निश्पक्ष न्यायको निम्ती पैरवी गर्नु पनि हो । अनि यस्तै यस्तै धेरै हो । दुबैको सहमतीमा बन्द कोठाभित्र कानुनी रुपमा उमेर पुगेका जोडीले गोप्य रुपमा शारिरिक सम्बन्ध राख्दा कस्लाई अप्ठेरो परेको हो, म केही जान्दिनँ । कहाँ हिंसा भड्कियो, अन्याएमा परेको को हो, अनि कसको के स्वार्थ हो भगवान जानुन् ।
मलाई फेरी लाग्यो, कहिलेकाहीँ यस्तो छड्केमा प्रहरीका तिनै जागिरदारहरु पनि पर्छन् होला । यो जागिरमा पनि प्राय घरपाई मिल्दैन मैले बुझेसम्म । त्यतिमात्र कहाँ हो र यस्तै समस्या भोग्नुपर्छ सहोदर दम्पत्तीले नै पनि । पोहोर साल दम्पतिनै समातिय भन्ने सुनेको थिएँ । हामी बुढाबुढी हौँ नै भनेपनि छोड्दैनन्, पुलिस दाजु । पहिले चौकी लैजाञ्छन् अनि बल्ल बरबुझारथ सुरु हुन्छ । धन्य हो ।
यौन चाहना आवश्यकता हो कि अनुशासनहिनता ? काम बासना जागृत हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो या विज्ञानको उपज ? कामुकता अपराध हो या सामान्य जैविक प्रक्रिया ? बुझ्न आईतबार पर्खिरहनु पर्दैन । एउटा बयस्क मानव मष्तिस्कले सजिलै ठहर्याउँ छ । यो आवश्यकता हो, प्राकृतिक र जैविक पद्धति हो । यसको सही समयमा सही ब्यवस्थापन हुन सकेन भने गम्भिर प्रकृतिका घटनाहरु निम्त्याउँन सक्छ।
जैविक रुपमा एकछिन घोत्लिने हो भने मानिसमा कामुकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तिन थरी हर्मोनहरु हुँदा रहेछन् । ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन र टेस्टेस्टेरोन । महिला र पुरुषमा उप्पन्न हुने हर्मोनको प्रकृति र अनुपात केही फरक छ । जव मानिसले बालापनबाट वयस्कतातिर प्रवेश गर्छ तब ग्रन्धीहरुले यी रसहरुको उत्पादन सुरु गर्दछन् । यीनै रसहरुले केटामा पुरुषत्व र केटीमा नारी गुणहरु विकसित गर्दछ ।
संसारमा विवाहको प्रचलन सुरुहुनु भन्दा कैयौं वर्ष अघिदेखि नै मनमिलेका केटाकेटीले यौन सम्पर्क गर्ने परिपाटी सुरु भएको थियो । यौन जैविक हो तर बिवाह जैविक होईन । मानिस बाहेकका अरु पशुपन्छिमा बिवाहको संस्कृति छैन । बिवाह गर्नुको पछि पनि मानिसको स्वार्थ छ, स्वार्थ शब्द अलि निर्दयी लाग्ला आवश्यका भनौँ ।
मैले सुनेको, उहिले बिवाह गर्ने संस्कृति नहुर्कंदै मनमिलेका जोडीहरुले सहवास गर्ने गर्छथे रे । यसरी अस्थायी रुपमा सम्बन्धहरु गाँसिदै जाँदा महिलाहरु गर्भवती हुने र आफ्नो गर्भ कसको हो भनेर सम्म पहिचान गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा पुरुषहरुलाई शिशुप्रति जिम्मेवार बनाउँन नसकिने गम्भिर समस्या देखा पर्दथ्यो रे !
अहिले परिस्थती फेरिएको छ । पुरुषहरुलाई जिम्मेवार बनाउँनकै लागि हिजोआज यसरी होटलहरुमा छड्के जाँच गरिएको त पक्कै होईन होला । यौनलाई हामी आवश्यकताका रुपमा स्वीकार गर्दछौँ भने यसको सहीसलामतमा ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि त स्वीकार्नु पर्ने होला नि ! हो, होटलहरु छापामार्ने शैली नै सही, त्यसो भए कानुन शंशोधन गरौँ । रेडलाईट एरिया बनाईदिउँ । विश्वका ६३ देशमा यही ‘प्राक्टिस’ त चलेको छ, हामीकहाँ नमिल्नुपर्ने किन ?
डस्टबिन नराख्दिने, अनि मझेरी फोहोर गरिस् भनेर कठालो समात्न मिल्छ र ? बयस्क उमेरमा ‘सेक्स’ त ‘हिडन फ्याक्ट’ होईन र ? हो मेरो मनमा यीनै र यस्तै प्रश्नहरुको चाङ छ । जिज्ञासाहरुको रास पहाडबाट तिलजत्रो बनाउँन मन छ । अहँ, मरे घट्दैन । यस्ता विषयहरुमा धेरै लेखुँ भने पनि ‘उरन्ठाउलो’ भईने पो हो कि ? कलम बन्द गरुँ होला ! ए साँच्ची मेरो देशमा निर्मलाहरुले कहिले न्याय पाउलान है !